Ugaarsiga Masukiye ee burburka sii waday ayaa sii xumaaday | RayHaber | raillynews
HometareenkaTurjumidda mashiinka dhagxaanta ee dhagxaanta ayaa sii socota
11 / 12 / 2012 tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Dhibaatooyinka isbeddelka Masukiye-ga ah ee loogu talagalay qalabka lagama maarmaanka u ah dhismaha qaybta gawaarida cusub ee Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) oo maraya magaaladeena ayaa sii socota iyada oo aan la dhicin.
Dhab ahaantii, ma jiraan wax badan oo laga hadlo ama lagu qoro. Si kastaba ha noqotee, sida magaaladu tahay mid aad u weyn oo aan qalad lahayn; waa in aan sii wadnaa dadaalladeenna si aan uga hortago khiyaanada.
Nuxurka dhacdada ayaa ah in qadka tareenka ee cusub ee 62 uu dhex maro gobolkeena YHT. Ra'iisal Wasaaraha ayaa aad u xiisaynaya mashruucan. 29 Oktoobar 2013 wuxuu doonayaa Tareenka Xawaaraha Sare inuu u socdo Istanbul iyo Ankara maalinta 90 ee aasaaska Jamhuuriyadda.
Ra'iisul Wasaaraha, Wasiirka Gaadiidka kala ah: Yıldırım. Wasiir Yildirim, "dhismaha gawaarida sida ugu dhakhsaha badan, ugu yaraan kharashka gobolka," ayuu hadalkiisa ku daray.
Marka la eego xogtayda, iyada oo aan loo eegin waxa, iyada oo aan loo eegin waxa la qabanayo, way adag tahay tareenkan si uu ula qabsado 29 October 2013. Haddii aad u culus, Ilaah wuxuu mamnuucayaa masiibooyinka waaweyn.
Wadada 12 ee wadada wadada Sapanca ee sannadka 3 ee Wasaaradda Gaadiidka kama dhamayn karto, waxaad haysataa habka YHT ee biloowga dhammaadka 6-8.
Duqa caasimadda Ibraahim Karaosmanoglu, oo eegaya dhacdad si macquul ah. "Anigu waxaan xaqiijiyay dabeecaddayda. Sannad kasta waxaan ku beeri doonaa 1 million geedo geedo ah oo ku yaala magaaladan. Meelaha 50-100 ku jaraan aaggaas oo ku yaala Iskuulka. Ka dib markii shaqada la dhammeeyo, mar kale ayaan dhali doonaa geedaha. "
Wuxuu u maleynayaa inuu qaldan yahay. Marka qaab-dhismeedka dabiiciga ah ee aagga uu sii xumaado; Haddii mashiinada dhismaha ay galaan oo ay jabaan dhagaxyada, ma suurtageli karto in dib loo soo celiyo dabeecadda gobolka si isku mid ah.
Madaxweyne Karaosmanoglu ayaa ii sheegay intii wadahadal ah. Veysel Eroğlu, Wasiirka Deegaanka iyo Duulimaadka, ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay arrintan. Wasiirka Eroglu, Madaxweynaha Karaosmanoglu ayaa shakhsi ahaan loogu yeeray, "Aman İbrahim Bey. Aaggu waa mid gaar ah. Fadlan taxadar in dabeecadda aan la burburin ". Horeba gobolka, dhulka hoostiisa Sapanca. Waa sharci darro in la isku dayo in la dhiso xashiish ay ku jirto.
Ma jiro wax sida Mashaqiyah u soo galay maraakiibta, oo bixiya kirada qof, isaga oo ku raali geliya qandaraaslaha YHT. Markii ay dawladdu heshiis la gashay shirkadda YHT, ayuu yiri, "Waxaan ka heli doonaa alaabta looga baahan yahay shaqadan booska ugu dhow. Hore u dhamee shaqada hore. " Haddii qalabka loo baahan yahay dhismaha tareenka wuxuu ka yimid meel ka baxsan, qaali, dhab ahaantii qandaraaslaha wuxuu faa'iido u yeelan doonaa boqolkiiba 10 kharashkan oo wuxuu ka heli doonaa lacag ka badan gobolka. Si kale haddii loo dhigo, gobolka ayaa ka faa'iideysan doona kaydka la heli doono adoo ka saaraaya dhagaxa dhagax ee looga baahan yahay wadada YHT ee kuugu dhow goobta dhismaha.
Tan ugu muhiimsan, waa in la dhammeeyo sida ugu dhakhsaha badan. Ra'iisal Wasaaraha ayaa riixaya arrintan. Markii Ra'iisal Wasaaruhu uu xakameynayo, Wasiirka Gaadiidka Yiri ayaa xayiray. Maamul goboleedkeena, iskaba daa oo ka dhaadhicin ra'iisal wasaaraha, xitaa wasiirka gaadiidka.
Si kastaba ha noqotee, dhacdadani, gobolkayagu wuxuu dhigi doonaa AKP dhibaatada. Doorashooyinka degaanka ayaa soo socda. Si aad Masukiye ugu beddesho dhagax, qalabka dhismaha ayaa soo galaya aagga, burburiyaa dhagaxyada, jarista geedaha iyo kirada webiga Gubasho, mana awoodi doonaan inay bixiyaan qiimaha siyaasadeed si fudud.
Madaxwayne Karaosmanoge wuxuu taageersan yahay dhismaha miino saarida ee kuyaala. Madaxwaynaha Gobolka Galler, mid ka mid ah xildhibaan Ilyas Sugar. Waxay yiraahdeen, in ka soo horjeeda Ra'iisul Wasaaraha iyo Wasiirka Gaadiidka. Jooji Masaajidka ku meel-gaadhka ah, ha magaalada oo idil ha nadiifiyo ".
Sibel Gönül waa shaki kuma jiro siyaasiga ugu da 'yar uguna haboon ee ka mid ah magacyada ugu sareeya ee AKP ee gobolka. Maaddaama Mrs. Sibel uu ogyahay gobolka iyo dadkaba si aad u wanaagsan, waxay arki kartaa sida isbedelka Masukiye loogu galay dhagax yar oo waxyeelo gaarsiin doona.
Sida iska cad, duqa magaalada Kartepe waxaa laga yaabaa in ay dhibto karabas. Xitaa Iftiinka Intellectual, M.Ali Okur, oo si daacad ah ... U ogow in dhagaxaas lagu dhisi doono halkaas. Danta qaranku waxay u baahan tahay tan
Haddii degaankan la baabi'iyo, kahor doorashooyinka bisha Maarso, 2014, qof waliba wuxuu sawiri doonaa sawirrada aagga la gooyey, dhirta ay sumeeyeen, waddooyinka ay ku dhufteen, suurta galnimada dalxiiska oo lumay. Waxaa jiri doona waxyaabo badan oo ka mid ah doorashooyinka. AKP waxay u badan tahay inay lumiso doorashadii, ugu yaraan sababahan, ugu yaraan Kartepe. Waxay hadda hoos u dhigayaan arrintan, laakiin taasi waxay keeni kartaa in AKP ay ku adkaato doorashooyinka magaalooyinka ee gobolka oo aan dhib ku noqonno.
Waxaa jira hal waddo kaliya: in lagu qanciyo Ra'iisul Wasaaraha. Waxaan u sheegay ra'iisul wasaaraha, arrin muhiim ah Arrinta keliya ee muhiimka ah waa in la dhammaystiro waddada YHT sida ugu dhakhsaha badan. "Waxaan u maleynayaa inaad dhihi doonto. Haddii aan ku casuumno ra'iisul-wasaaraha waxaanan booqannaa gobolka halkaas oo dhagax la doonayo, dhibaatada waa la xalliyaa. Jadwalkeedu waa mashquul, mana iman karto. Aynu tusno sawirada. Gacmaha wargeyskayaga, gobol kasta oo ka mid ah dhagaxyada laga soo gooyey, sida miis, xaashida jadwalku waxay leedahay sawiro qurxoon. Haddii Mr. Ra'iisul Wasaaruhu arko sawiradaasi, wuxuu arkayaa geedaha, in Burn Creek, waan hubaa, Go Guud laga helo xNUMX-15. Halkaan ha taaban. "
Uma maleynayo in wasiirka gaadiidka Binali Yıldırım uu noqon doono mid xasaasi ah oo xasaasi ah. Laakiin haddii ra'iisul-wasaaraha uu arko aaggaas, waa la dili karin. Su'aashu waxay tahay: Waa noocee dhalinyaradu u arkaan fursado, dhagaxa dhagaxa dhagaxda ee YHT ee quruxda cajiibka ah ee gobolka si loo muujiyo sawirrada ra'iisal wasaaraha ayaa muujin doona?
Marka laga reebo Mr. Sibel Gonul, uma maleynayo in uu jiro qof labaad oo isku dayi lahaa. Anigu ma aamino Mr. gudoomiyaha oo dhan. Badhasaabka ayaa isku qanciyay. Wasiirka Nihat Ergun, arrimahan oo dhan ma soo galo, isaga oo iska fogeynaya dhacdada.
Mrs Sibel waa rajada kaliya ee Masukiye. Waxa laga yaabaa inuu noqon karo mid xoog leh. Waxa uu tagi karaa oo arki karaa Öztürk oo iska casilaya xilkiisa Agaasimaha Guud ee Beeraha sababtoo ah ma uusan saxiixin mashruucan. Agaasimihii hore ma uusan saxiixin, sababta oo ah damiirka nacaybku, wuu baran karaa. Wuxuu qori karaa faylka hore ee ra'iisul-wasaaraha isagoo sawirro muujinaya sawirka dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Mr. Ra'iisul Wasaaraha, "Okay, YHT 2 bilood dabayaaqadii. 5-10 Milyan TL lacag dheeraad ah ayay u tahay gobolka. Halkaan ha taaban. "
Haddii aysan midkoodna AKP u oggolaan inay sidaas sameeyaan, u ogolow inay helaan saacad 10 saxaafada gudaha ee Kocaeli oo ka socda Mr. Başakan. Aan tagno Mr. Waxaa jira hab lagu joojiyo arrintan, si loo joojiyo dilkan naxariis darrada ah ee magaalada this. Haddii aysan helin, Masukiye wuu dhamaan doonaa. Laakiin mar kale ayaan kuu digayaa. AKP waxay la dhibtoonaysaa sida ay u socoto Burn Creek.
Wadooyinka Masukiye waa la ruxay
Waddooyinka Masukiyen Asphalted
Ficilkii dhagaxii dhagaxii dhagaxii dhagaxdeedku wuxuu u galay shaxan
Tuulada Yanık iyo cagaar iyo buluug, ama xayawaankaygu u socdo tareenka xawaaraha sare leh?
Tallaabooyinka bay'ada ah ee ka socda CHP ku-xigeennada YHT
Yanik Köyluler Caymiskii Mucaaradka ah ee Cunnoolajiyada Muuqaalka
Miyuu jiraa malyuuc in uu uurjiisto?
Ma aqbalin dhagaxii dhagaxii, shaqadiisii ​​waa | Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare
Halkan waa dhagax dhagax ah Tareenka Xawaaraha Sare
Karaosmanoglu, Anigu ma amar ka qaadin qof cid kale oo xayawaan ah
U qaado qandaraas gaar ah oo loogu talagalay qashin-qubka
Duqa Magaalada Ibrahim Karaosmanoglu
Xanuunta maalinta koowaad ee Ankara Metrobus